Betty Akasvirwa MuPool naLodza Takatarisa ! – Makuhwa.co.zw
Betty Akasvirwa naLodza Takatarisa MuPool Hatingati Betty aive hure asi akadenha mboro ndokubva yamuruma. Nhau iyi yakatanga tiripaParty KuMega 2 MuHarare. Paive na Lodza (anova ndiye akasvira Betty) nemusikana wake Tozi, neni and 4 other friends. Musikana waLodza ndiye akadenha Betty achiti “Face yako irikuratidza kuti wasuwa mboro” tese takaseka, asi Betty akati vanhu vese vanyarara ndokupindura achiti “Ko wadii kundipa mboro yaLodza kana dziri tsitsi” Tozi haana kupindura akangoseka.
Party went on tichidya nyama nekunwa kusvika yave time yekuenda kumba. Tozi akati “lets continue party kumba kwedu, my parents are out of town, saka you guys follow me.” Takatevera paye ndokupfura nepakabhawa karimunaChinhoyi street ndokuwedzera alcohol. We got kuBorrowdale kunogara Tozi and takacontinue neparty…
Betty akatishamisa tose paakabvisa top yake neBra claiming kuti kwaipisa. Ini handidi kuyepa, asi panguva iyoyo Mboro yangu yakabva yamira. Ndakashaya kuti ndoiviga sei sezvo ndanga ndakapfeka tight jeans. Ok let me get back to Betty…. Panguva iyoyo Tozi akati “maybe we should take this party outside to the pool” and we all agreed ndokunanga panze. Pamba pakanaka ipapo, papool pacho pane machairs ekuti kana wabva mumvura unorara hako ipapo uchirelaxa. All this time Betty aive asina top or bra. When we got to the pool, the BIG question was HATINA MASWIMMING COSTUME! Tozi akapindura nekubvisa hembe dzake dzose ndokudiver mupool. Betty akabvisa kaMini kake ndokupinda muvhura. Varume vese 6 vaivepo hapana akaMOVER, everyone was like a statue takatarisa Betty naTozi in the pool.
Vakabuda mumvura muya pasina kana murume apindamo tese taive takangotarisa. Tozi akanyengerera Lodza kusvika abvisa hembe and pushed him in the water. Mababy akadzokera futi mumvura, ndokutanga kutamba chikudo paya naLodza. Pasina chinguva vakabuda ndokuuya pamachairs ndokurara paya covered in towels. This time Betty ndiye akatanga after aona mboro yaLodza yanga yaita kadiki diki nemvura mupool. “Ndiko kaMbolo kawanga uchivhaira nako here aka nhai Tozi”, Tozi akaseka but this time Lodza akapindura akati “idenhe uone kuti inoita sei” akataura achiseka. Betty haana kumbotarisa Tozi akangosimuka netowel rake around her waist ndokugara pamakumbo aLodza akaisa one gumbo kuside. Lodza anga akarara pachair akasimuka ndokugara, face yake was directly inline nemazamu aBetty. Betty akatanga kuita kunge arikupa Lodza Lap Dance.
Lodza akayasha pekubata kana pekutarisa… Takamutarisa tese kudai vese naTozi who didn’t seem to care. Lodza akati “wainzwa here kukura kwayo?”, Betty haana kana kutaura akangoti ehe nemusoro. Panguva iyoyo towel raBetty rakadonha sezvo anga akutamba zvine speed pamakumbo aLodza. Hameno kuti towel raLodza rakavhurika sei asi takangonzwa Betty aridza kamhere achiti “maihwe sorry Tozi, Mboro yake yapinda mukati nemistake” Hapana akaMover, Lodza seemed confused, Tozi akangoti “aah hanti matosvirina henyu mogomirirei manje?” BUT she said this with a smile….. Ndokusimuka Tozi uya ndokuenda pachair pana Lodza naBetty, she kissed Lodza ndokubva ndokudiver into the pool. Lodza akabva akabata magaro aBetty ndokumusimudzira mudenga ndokumugadzikira pamboro yake zvine force. Akabva akatanga kusvira ipapo tese takatarisa, pasina chinguva Betty akanga akuchemerera achiti “Lodza svira beche iri Tozi akatarisa” This went on for about 7 minutes kusvika Lodza atakura Betty asina kuburitsa mboro mukati. Akapinda naye mumvura nepamasteps ndokutanga kumusvira akatsamhira madziro mumvura imomo. Tozi akaita something that shocked me upto today… Akasvika padhuze neava vaisvirana ndokukisser Lodza then ndokukisser Betty. Takatanga kuombera takatarisa kudai. Betty panguva iyoyo akatunda Lodza asati atunda. Lodza akataura Betty out of the pool, Betty seemed powerless achiita kunge afainter. Akamurarisa pachair paye, iye ndokugara panext chair. Tozi akauya ndokutora mboro yaLodza ndokuyiisa mukanwa. Pasina chinguva Lodza akatunda Betty ndokumedza zvese. Yakaita kunde Blue Movie tese takatarisa kudai. Mboro yanga yakamira yakaoma kunge penzura! …..
Related Topics:Betty Akasvirwa MuPool naLodza Takatarisa !